Ngokuphathelele indlela yokujongana nempawu zenguqu ezinxulumene nolusu, ikhulu leencwadi zibhalwa. Zinezinkulungwane zokupheka kubutsha. Ngokuncedwa kwidermatologist, sakhetha ezi sixandathu ziphumelele kakhulu!
Njalo uyenze ukukhangela.
Ukunyamekela isikhumba esincinci kubaluleke kakhulu. Okokuqala, ulusu lufuna ukucoca ngokucokisekileyo. Ukusetyenziswa ngokukodwa kwendlela yokubamba ukunyamekela kwesikhumba kwiinkqubo zokunakekelwa kwesikhumba ezinokuguga. Inkqubo yokuhlaziya iseli iyancipha emva kweminyaka engama-25. Ngenxa yoko, ulusu luba luhlaza, lubukeka lukhathele, lwakhiwa imibimbi. Ngexesha lokujonga, ugcino lweeseli ezifileyo luyakususwa, kwaye abantu abatsha banikezwa ithuba lokukhula ngokunyanisekileyo, ngoko ulusu lobuso luba luhlambulukile. I-Cosmetologists icebisa ukuba ihlala ihlaziya ngaphambi kokuba isebenzise imaski - oku kwandisa ukuphumelela kwabo. Khumbula ukuba amabhinqa anomzimba onobubele kunye obunqabileyo abonisa iipelisi ezinokubumba ezinqabileyo: zona, ngokungafani neengqungquthela ze-abrasive zemvelo, zineendawo eziphazamisayo ezingabhubhi i-epidermis.
Abaninzi abasetyhini abanonophelo lokunyamekela kwesikhumba bayakuhoxisa isincomo ukuba basebenzise rhoqo itoniki. Kodwa kuya kuvumela ukucoca ngokucokisekileyo kwimihlaba, kwaye kwenza ulusu lube lukhuni ngakumbi kwimveliso yonyango. Ngoko ke, kubaluleke kakhulu ukukhetha imveliso yokunakekelwa kwesikhumba.
Faka i-bran ekudleni.
Ngokuqhelekileyo iingxaki zesikhumba zivela ngenxa yokusilela kwevithamini zeB - ezi zinto zifunyenwe ngobuninzi beburin. Ukongezelela, ukulungiswa kokusanhlamvu kufakazela umsebenzi we-intestine kwaye kususa i-toxins emzimbeni, kwaye kuyaziwa ukuba iingxaki zamathumbu zingenye yezizathu zesimo esikhuselekeni sikhumba.
Okokuqala, kuphela amanzi apholileyo. Amanzi ashushu awenza isikhumba esomileyo sitshise, sinegcobo, siphucule imithana yegazi kunye nokwandisa ii-pores. Inketho efanelekileyo: ekwindla nasebusika, uhlambe ngamanzi, uphephe kwi-degrees 29-32, entwasahlobo nasehlobo-ukuya kuma-21-28 degrees. Umgaqo wesibini: sebenzisa ukucoca izimonyo ebusweni, obufanisa uhlobo lwakho lolusu. Ukunyamekela ukunyuka, kungcono ukuthenga iimveliso zokunakekelwa kwesikhumba ezingaphantsi kweminyaka. Abayikuhlambulula kuphela, kodwa banokubambana nempawu zokuguquka kwexesha.
Thola ukulala ngokwaneleyo.
I-cosmetologist engcono kakhulu iphupha! Ngethuba lokuphumla ebusuku ukuba iiseli zesikhumba zihlaziywa. Iinkqubo zokubuyisela emzimbeni zenzeke ikakhulukazi ukususela phakathi kobusuku ukuya kwiiyure ezine. Kwaye ukuba umzimba usekwe ukuze uphuculwe, kucetyiswa ukuba ulale ngo-24.00.
Phuza itiye eluhlaza.
Iqulethe ezingaphezu kwama-300 izondlo. Iingqayi ezimbini okanye ezintathu ziselo ngosuku zandisa ukhuseleko, zisuse i-toxins kwaye zizalise igazi nge-antioxidants. Ukukhishwa kweeti eziluhlaza sele kusetyenziswe ngempumelelo kwi-cosmetology. Inxalenye yeendlela eziphambili zesikhumba sokusweleka.
I-Strawberry yogurt efriziwe
Iimbono ngezipho kubalingane
Isityalo esingaphandle kwireya
Luhlobo luni lokutya oluyimfuneko ekubambeni abantwana?
Usuku lwabaSebenzi boRhwebo 2016 - ukuvuyisana ngeprose, ivesi, kunye nehlazo, igosa, elifutshane, elifutshane leSMS
Izinto ezilishumi awudingi ukuzenza kwintsapho yakho yobomi
I-Potato zrazy ngenyama